जनतासँग नेपाली सेना
सागर विक्रम बस्नेत–रामेछाप,
भनिन्छ हरेक समस्याले अवसर लिएर आएको हुन्छ । बिनास पछि मात्र विकासको ढोका खुल्छ । भने जस्तै पैरो गएपछि गारो लगाउने चलन छ । कति चिज यस्ता छन् जुन आवश्यक छैन भईदिन्छ त्यस्तै । नयाँ वर्षको दुई हप्ता पनि पुरापुर बित्न नपाउँदै, समग्र देशवासीहरुको मुटुको धड्कन नै तेज गतिमा बढाउने गरी १२ गते मध्यान्ह १२ बजे महाबिनाशकारी भुकम्प गयो । यसले घर, जमिन, जगत, खोलानाला, पाखापर्वत मात्र हल्लाएन सरकार समेत हल्लाउन भ्यायो । भुकम्प गएको हप्तादिन सम्म सरकार के गर्ने र कसो गर्नेमा मात्र सिमित हुन पुग्यो । नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरु चेन अफ कमान्डको समेत प्रवाह नगरी जसले जति सक्यो उत्ति गर्नेतिर लागे ।
रामेछापको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने नन्दाबक्स गण रामेछापले जिल्लाका प्रायः दुवै नगरपालिका र ४५ वटै गा.वि.समा बैशाख २२ गते राहत तथा उद्धारको लागि आवश्यक टोली परिचालन गरिसकेको थियो । जिल्लाको तात्कालिन सालु गा.वि.स हालको मन्थली नगरपालिक वडा नंम्वर ७ र ८ मा खटिएको टोलीको नेतृत्व गणका सुवेदार भरत बहादुर के.सीले गरेका छन् । बैशाख २२ गतेदेखि उनी निरन्तर मन्थली नगरपालिका यी दुईवटा वडामा राहत, उद्धार र अस्थायी संरचना निर्माणमा आहोरात्र खटिरहेका छन् । जनसम्पर्कका दृष्टिकोणले अव्वल मानिएका उनीसँग गणका २० जना सेनाहरु संलग्न छन् । सुरुका दिनमा घरका भग्नाबशेषभित्र पुरिएका सामाग्रीहरु झिकी सम्वन्धित् घरका सदस्यहरुलाई बुझाउने कार्यमा व्यस्त रहेका उनी लगत्तै धराप अवस्थामा रहेका घरहरु पन्छाउने कार्यमा तिब्रता दिन थाले ।
उनी अस्थायी रुपमा बसेको च्याँउकेठाँटि बजार क्षेत्रमा मेरो घर पन्छाईदिनु प¥यो भन्दै आउनेहरु उनलाई ओछ्यानमै भेट्न आँउछन् । पिडितको आग्रहलाई स्विकार्दै उनी सहित उनको टोली सम्वन्धित् पिडितको घरमा पुग्छन् र पिडितको अपेक्षा अनुसारको काम गरेर फर्कन्छन् । हालसम्म सालुका विभिन्न बस्तीहरुमा पुगिसकेका छन् । उनी नेतृत्वको टोलीले सिम्ले, रानागाँउ, मचवारी, काफ्लेटोल, च्याँउकेठाँटी, दमाईडाँडा, सालु बजार, कविलास, पोखरे, सामलीस्थान, गैराथोक, डाँडागाँउ, पाण्डेगाँउ, निवुवावोटे, कालीमाटी, भेडिखर्क, तिनपिप्ले, तित्रीडाँडा लगाएतका स्थानहरुमा सयौंको संख्यामा घरहरुका भग्नाभषेश पन्छाउने र धरापमा रहेको सर सामाग्रीहरु सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सफलताका साथ हात पारीसकेका छन् । त्यस्तै नगरपालिकाका वडाहरुमा रहेको सेतीदेवि उ.मा.वि, सिद्धेश्वर मा.वि र भिमेश्वर नि.मा.वि, शहिद स्मृति बहुमुखि क्याम्पस मन्थलीको लागि आवश्यक पर्ने ३०० थान बाँस ढुवानीका लागि समेत मद्धत गरेको टोलीले नियमित कक्षा संञ्चालनको लागि अस्थाई टहराहरुको निर्माणमा समेत अतुलनिय योगदान पु¥याएका छन् । मानव जीवनलाई एक पछि अर्को गर्दै आउने प्राकृतिक बिपत्तिहरुले प्रताडित बनाएको बेलामा पनि उनीहरुले सहयोग गर्न भ्याए । हावाहुरीका कारण अस्थायी रुपमा पाल टाँगेर बसेका सालु र च्याँउकेठाँठि बजारबासीहरुलाई बजारमा रहेको बुढो पिपलको ठूलो जोखिम थियो । जुनसुकै बेलामा पनि पिपलको हाँगा भाच्चिएर ठूलो मानविय तथा भौतिक क्षति हुन जाने खतरा थियो । उनको टोलीले त्यसमा पनि कन्जुस्याँई गरेन धराप हाँगाहरु काटि पन्छाईदिएकाले पनि सालुवासीहरु सदाको लागि गण प्रति ऋणी छन् ।
के भन्छन् पिडित??
भुईचालोले मानसिक र आर्थिक रुपमा बिक्षिप्त भएका सालु बासीहरु सेनाको कामबाट राहतको अनुभुति गरिरहेका छन् । अवस्था अनुसारको राहत नपाएको हुँदा उनीहरु राहतको नाममा सरकार र विभिन्न संघ संस्थाहरुको काम प्रति सन्तुष्ट छैनन् । राहतको नाममा सालु वासीहरुलाई थप आहत पुगेको गुनासो सुन्न पाईन्छ । बरु नेपाली सेनालाई नै राहतको काममा समेत प्रयोग गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो कि? बास्तविक पिडितका परिवारहरु सम्म राहत पुग्थ्यो कि भन्ने बिचार समेत राख्न भ्याँउछन् पिडितहरु ।
निर्माण कार्यमा कस्तो छ ? जनसहभागिता
भुकम्प आफैमा प्राकृतिक विपत्ति हो । यसले क्षति ग¥यो सवैलाई पिडा दियो गयो बस यत्ति हो । चराले पनि आफ्नो गुँड आफै बनाउँछ तर सेनाको काममा ऐक्यवद्धता जनाँउदै सहयोग गर्नेहरु औंलामा मात्र सिमित छन् । विद्यालय समुदायको, घर व्यक्तिको, सार्वजनिक सरोकारका पूर्वाधार जस्तैः स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय साझा सम्पत्ति यत्ति हुँदा पनि निर्माणका लागि सम्वन्धित् व्यक्तिहरुमा चासो कम हुनु चाँहि अस्वभाविक देखियो । अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने समय भन्दा बढि सेनाका लागि सामाग्री जुटाउन चाँहि बढि समय खर्चिनु परेको देखियो कम्तीमा पनि संरचना निर्माण गर्ने सामाग्रीहरु व्यक्ति वा समुदाय स्वंयले उपलब्ध गराईदिएको भए निर्माण कार्य थप सरल बन्न पुग्थ्यो । अझैपनि धेरै संरचनाहरु बन्न बाँकी नै छन् ढिला भएको छैन सहकार्यका लागि कन्जुस्याँई नगरौं । सुवेदार भरत बहादुर के.सी त एक प्रतिनीधि पात्र मात्र हुन् यत्तिका प्रतिकुल बातावरणका बावजुद पनि अनवरत लागि पर्नुहुने सेनाका सकल दर्जा, पदिक र अधिकृतहरुलाई मेरो सलाम छ ।